Maxaa kala heesta ragga guurku ku cusubyahay iyo iskaabulada ay horay saaxiibka u ahaayeen ee wali noloshii hore dhex dabaalanaaya? | warsugansomaliya.wordpress.com
Iyada oo ay caadi iska tahay in Soomaalidu ay tahay dad Ilaawsha dhaw oo aan dib u raacin halkii ay shalay joogeen marka laga tago dakanooyinka ama aanooyink oo aysan ilaawin ayaa waxaa soo baxday in waxyaabaha ugu daran ee raggu ilaawaan ay tahay nolosha iskaabulanimada arintaas oo noqotay mid iska hor-keenta oo aad ukala fogeysa rag in badan saaxiib ahaa qolna wada seexan jiray.
Arintaas oo aan ka helnay dhalinyaro nolosha iskaabulanimada hada saaxiib la’ah oo ka dhega xiran nolosha lamaanaha, ayaa waxa ay tahay qisa cajiib ah oo dhacday, waxaa mid kamid ah dhalinyaro koox aheyd oo qol u wada kireesnaa mid kamid ah oo arinta goobjoog u ahaa uu sheegay in isaga iyo saaxiibkiisii hore oo ay nolosha iskaabulanimada waqti badan isla soo qaateen ay kala go’een maalma uun kadib markii uu u dalacay nolosha lamaanaha.
“Yar aan in badan qol wada seexan jirnay oo waliba aan ahaan jirin raga is-tir-tirka badan oo iska jiifa jiray qolka meesha uu kasoo gaaro ayaa guursaday, waxa uuna noo yimid maalma uun ka dib aqal-galkiisii, waxa uuna war ka bilaabay gurigiinnu boor badanaa? War waxaan sidee ugu nooshihiin? Sidaan idinma anfaceyso wallahi nolol xun ayaad ku jirtaan. Kursi dheer ii keena boorkaan laguma jiri karee kabahana waan lasoo gelayaa guariga si boorku uusan ii taaban”, mid kamid ah dhalinyaradii qisadu ku dhacday ayaa iiga waramay.
Arintaan ayaa waxa ay tahay halka ay isku qoomayaan oo ay ku kala tegayaan ragga in-badan qolka ku wada qaatay nolosha iskaabulanimada ee qaarna ku haro halkoodii hore halka qaarna ay ku biiraan dabaqada xaaslayaasha.
Qibradlaha iskaabulada sanadaha soo dhex-maquuranayay hadana wali aan shaatiga u gashan sidii uu dabaqadaasi uga bixi lahaa ayaa waxa uu sheegay in loo baahanyahay ruux waliba marka uu hadlaayo in uu miisaamo erayada uu isticmaalayo si aysan u noqon kuwa isgana saameeya sidoo kalana cuqdad iyo xumaato dheeraad ah ku reeba dad kale sida asaxaab hore.
Isku soo wada xooriyoo, ma jirto hab wanaagsan oo ragga ku cusub nolosha xaaslanimada ay kula macaamili karaaan saaxiibadoodii hore maadaama ay Soomaalidu dabeecad u leedahay in halkii ay soo dhaaftay aysan xasuusan, waliba dadka qaar ay ku dagaalaan hadii lasoo xasuusiyo nolol markii uu ku jiray uu ku qasbanaa hasa yeeshee hada dib kala xun oo uu aad u necebyahay soo hadal qaaditaankeeda.
← Sheekh Xasan Daahir Aweys oo aqbalay in uu Saxiixo Sadax Qodob oo lasoo hordhigay balse codsi jeediyay(Warbixin Xasaasi ah)
Daawo muuqal Cali Khaliif Galeyr oo sheegay in Shabaab iyo Madaxweyne Xassan Sheekh uu dhax maray xariir dhanka taleefoonka ah →